Naya Post Nepal | दत्तलाई सिनियर बनाउंदा दाहाल, गौतम र प्रधानलाई अन्याय !
दत्तलाई सिनियर बनाउंदा दाहाल, गौतम र प्रधानलाई अन्याय !
काठमाडौँ / सरकारले हालै नियुक्त गरेको प्रहरी प्रमुखको विवाद अदालत पुगेको समय सशस्त्र प्रहरी वलमा भएको एआईजी बढुवा प्रकरण पनि विवादमा परेको छ । आईतबार मात्रै सरकारले नारायण दत्तलाई डिआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, रिक्त रहेका दुई एआईजी पदमा किन एकजनाको मात्र बढुवा सिफारिस गरियो भन्ने विवाद संगठनमा शुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।
बुझ्नमा आए अनुसार वंशी दाहाल, चन्द्रप्रकाश गौतम र किशोर प्रधान डिआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुने रोलक्रममा थिए । तर, बुधबार गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले काग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काको दबावमा आफ्ना मान्छे मात्रै बढुवा सिफारिस गरेको भन्दै संगठन भित्र चरम असन्तुष्टी चुलिदएको स्रोतको दाबी छ ।
बिशेषत् सशस्त्र वल सीमा सुरक्षा र भिआईपीहरुको सुरक्षार्थ खटिने गरेकाछन् । र, मधेश प्रदेशमा रहदा होस् या संगठन भित्रको कार्यसम्पादनका हिसावले डिआईजी चन्द्रप्रकाश गौतम एआईजी हुने अग्रपंत्तीमा थिए । तर, गृहमा बसेको बैठकले कार्यसम्पादन, संगठानिक आधारलाई भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई रोजेको गुनासो डिआईजीहरु रहेको बताईन्छ ।
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र अर्का एआईजी रामशरण पौडेलले आईतबार मात्रै अवकास पाएका छन् । र, सरकारले गृहको सिफारिसमा महानिरीक्षकमा राजु अर्याल र पौडेलको स्थानमा नारायण दत्तलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रिक्त रहेको २ एआईजीमा बढुवा हुन ४ जनौ डिआईजीहरुले आवेदन पनि दएिका थिए । तर, पछि महानिरीक्षकमा लैजान सहज हुने हेतुले स्थानियतहको निर्वाचनको मुखैमा एकजना मात्रै एआईजीका रुपमा अघि सारिएको स्रोतको दा”बी छ ।
स्रोत भन्छन् “उपसभापति खड्काको दबावमा सिनियर बनाउंन एकजनाको मात्रै नाम एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आधारमा उत्कृष्ट रहेकोहरुलाई पाखा लगाईनुलाई सशस्त्र प्रहरी संगठन भित्र सकरात्मक रुपमा हेरिएको छैन् ।”
२०७९ बैशाख २३, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 258 Views